Multi- function ကိုဝက်အူလှည့၏အားသာချက်များဘာတွေလဲ? - ရောင်းချသူများသမဂ္ဂကုမ္ပဏီလီမိတက်
Multi- function ကိုဝက်အူလှည့၏အားသာချက်များဘာတွေလဲ?
ဝက်အူဖြစ်စေ၊ ပြန်ဖွင့်သည်ဖြစ်စေ anti-clamp သည် screw များအားမတော်တဆဆုံးရှုံးခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပြွန်သည်ပါးလွှာသောသံမဏိပြွန်ဖြစ်သဖြင့်လူလက်ဖြင့်မရောက်နိုင်သောနေရာများအတွက်ဝက်အူသည်အလိုအလျောက် ဝင်၍ ဝက်အူအပေါက်ထဲ ၀ င်နိုင်သည်။ Anti-clamp ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဝက်အူကိုအခေါင်းပေါက်ထဲတွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်ထိုဝက်အူသည်ပစ်မှတ်ပေါ်တွင်တိကျစွာနေရာချနိုင်ပြီးဝက်အခေါင်းသည်သတ္တုပြွန်ဖြစ်ပြီးပစ်မှတ်ထဲသို့မဝင်မီဝက်အူမလှုပ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ပြီးဝက်အူလှည့်လှံတံနှင့်အစဉ်အမြဲလိုက်ဖက်သည်။ , ဒါကြောင့်ဝက်အူအလွယ်တကူဝက်အူအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်အောင်။ ထိုဝက်အူသည်ဝက်အူခေါင်းအုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်လူ့လက်ချောင်းသည်ဝက်အူကိုမထိရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပစ်မှတ်သို့မဝင်မီဝက်အူတင်ထားခြင်း၊ သာမန်ဝက်အူလှည့ကိုသုံးတဲ့အခါ။ ညှပ်ဆန့်ကျင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဝက်အူလှည့်သည်မည်သည့် ဦး တည်ရာကိုမဆိုသယ်ဆောင်။ ပစ်မှတ်သို့သယ်ဆောင်နိုင်ပြီးဆွဲအား၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဝက်အူသည်လျှောကျလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဘက်စုံသုံးဝက်အူလှည့်ကိရိယာကိုအသုံးပြုနည်း - ဝက်အူဆွဲသည့်အခါ၊ ဝက်အူခေါင်းအုံးတွင်ဝက်အူကိုထည့်ပါ၊ ပစ်မှတ်ပေါ်ရှိဝက်အူတိုင်ကိုတွန်းရန်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးပြွန် (သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောလက်ကိုင်) ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ကာအခြားတစ်ဖက်ကို သုံး၍ ဝက်အူလှည့်ကိုသုံးပါ။ ကိုင်တွယ်။ ဝက်အူကိုချသည့်အခါ၊ ဝါယာကြိုးကိုဆန့်ကျင်သည့်ဝက်အူလှည့်တွန်းရန်အခြားလက်ကို အသုံးပြု၍ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆလင်ဒါကိုတစ်လက်ဖြင့်ကိုင်ထားပါ။